Labo Musharax Midkood oo loo saadaalinayo in uu ku guuleesan doono Madaxweynaha Somalia - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Muqdisho waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyay ay sameenayaan Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ,waxaana mashquul xoogan laga dareemayaa qaar kamid ah Hoteelada Muqdisho iyo xarumaha ay degan yihiin Musharaxiinta.
Doorashada Madaxweynaha oo lagu wado in 8-da bishan oo maalin kaliya naga xigto ay ka dhacdo magaalada Muqdisho waxaa u sharaxan 23-Musharax, waxaana Musharaxiinta badi ay yihiin kuwa aan saameyn sidaa u weyn ugu laheyn doorashada.
Doorashada ayaa sanadkan ah mid xasaasi ah oo ka adag Doorashooyinkii hore u dhacay, waxaana Musharax kasta uu u hanqal taagayaa dadaal badana ku bixinayaa in uu kusoo baxo Kursiga Madaxweynaha Soomaaliya .
Labo kamid ah Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn loo saadaalinayaa in ay isugu soo hari karaan doorashada ugu dambeyna uu kursigan ku guuleesanayo midkood hadii uusan imaan isbadal lama filaan ah.
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa si weyn loo saadaalinayaa in midkood kusoo baxo Kurdsiga Madaxweynaha, waxaana tartanka ugu adag uu dhax mari doonaa labadan Musharax .
Labadan Musharax ayaana saacadigii ugu dambeeyay waday olole xoogan iyo kasbashada Xildhibaanada, waxa ay sidoo kale Musharaxiintan isbaheysiyo la sameenayaan qaar kamid ah Musharaxiinta kale si uu mid kasta uu guul ku gaaro.
Xasan Sheekh ayaa heesta Taageerada Xildhibaano badan oo katirsan labada Aqal , Sheeklh Shariif ayaa sidoo kale isna saameyn badan leh aadna u kasbaday qaar badan oo kamid ah Xildhibaanada labada Aqal ee codkooda lagu kala bixi doono.
Musaharaxiintan ayaa si weyn looga dareemayaa ololahooda magaalada Muqdisho, waxaana xarumaha ay degan yihiin saacad kasta tagaya Xildhibaano katirsan labada Aqal kuwaa oo gor gortan la galaya Musharaxiinta.
Dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn uga dhursugaya doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo maalinta arbcada ka dhaceysa magaalada Muqdisho, waxa ayna shacabka ay yihiin kuwa kala taageersan Musharaxiinta uu tartanka adag u dhaxeeyo.